Ukukhulelwa - kuyinto inqubo emangalisayo ezenzeka emzimbeni womuntu wesifazane bese oluthinta ngqo ke. Bobabili laba besifazane kungenzeka ubona izinguquko eziningi kuthabathela ecaleni ukuthi ngokushesha ukubamba iso. Lena inqubo ehlukile futhi emangalisayo, ngoba nezinyanga zokuqala eziyisishiyagalolunye emzimbeni womuntu wesifazane kusukela kuseli eyodwa uyakwazi kabusha ephilayo ephelele.
Omama abaningi abalindele unesithakazelo kanjani ingane esiswini, njengoba yenzeka izinsuku, amasonto nezinyanga. Ngenhlanhla, ezobuchwepheshe zisenza sikwazi ukwazi ukuthi, ungabuka amavidiyo ngisho ne ukuthuthukiswa ingane, eziqala kuseli eyodwa futhi liphetha ngamazwi ukuzalwa komntwana ezweni.
Ngesonto lokuqala ingane iqoqo amaseli, usuku lwesikhombisa umntwana ongakazalwa - yinhlama amakhulu amaseli. Manje ubizwa ngokuthi zygote. Futhi nsuku zonke amaseli uhlukanise xaxa futhi ngokushesha.
ngesonto Okwesibili - lokhu akulona sokukhulelwa uqobo, noma umntwana esikhathini esizayo futhi inamathela odongeni lesizalo, manje kukhona ukukhula we follicle, ngemva kulesi sigaba bese ukuthi kuyonqunywa, owesifazane akwazi azalele noma cha kuyoba.
Kusukela lwesithathu neviki yeshumi nambili kuyinto embryonic period, kuphela ngesonto wesine yena ungase uphawule ukungabi zokwehlukaniswa, izinguquko ezithile (ukozela, ukugula ekuseni, ukungakuthandi ukudla, njll) ezihambisana nokukhulelwa. Manje, enye indlela yokuhlola ngamaphesenti ayikhulu izoqinisekisa yokuthi yokukhulelwa.
kwesonto lesishiyagalombili nangale
Kuphela kulesi sigaba kwetinhlavu umzimba kanye yangaphakathi izitho cishe iphela ultrasound isithombe ungakwazi ukuhlukanisa ngokucacile inhloko, imikhono, imilente, iminwe, amehlo, umlomo kanye nezinye izitho zomzimba. Manje ingane ukala 5 amagremu, kodwa usuqalile ukuba matasa.
Kusukela lesithathu kuya ngenyanga yesishiyagalolunye isivele umuntu agcwele, nsuku zonke, akubonako abanye amathuba amasha, amakhono amasha.
Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi ingane esiswini? Lo mbuzo uvame bahlushwe abazoba abazali. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona:
isethulo cephalic (sibheke phansi);
Uma isikhundla ingane ngaphambi kokuzalwa sibheke phansi, kuba nomphumela elihle kunawo kulesi sikhundla sibonisa lokuzalwa yemvelo (Yiqiniso, uma kungekho ezinye Izimo). Kodwa ngisho esimweni esinjalo indima ingane umphumela yimpumelelo kuncike ezicini ezilandelayo:
isikhundla ingane entanyeni (noma ukuqondisa a izimisele);
lapho umuntu esewusana, nabanye abaningi.
Kukhona ezinye izinketho ze-indawo ingane ngesethulo cephalic yilezi:
ebhekene esiswini noma nomgogodla;
kancane baphendukela kwesokunxele noma uhlangothi lwangakwesokudla;
longitudinal, transverse noma isikhundla etshekile.
Isikhundla yimpumelelo kakhulu isethulo cephalic - a longitudinal, fontanel elincane phambili, kodwa izingane eziningi zizalwa entanyeni phambili. Kumaviki awu 20 i-fetus iyakwazi kakade ukuhambisa ngenkuthalo ekuthuthukiseni emisipheni yazo ngesikhathi ukunyakaza kwengane ngeke kube nzima ukuba kuphenywe isikhundla sakhe. Kulesi sigaba, ke ngenkuthalo ihamba, liyaphenduka, kodwa kuza isikhathi lapho ingane isikhala kancane, futhi kuthatha isikhundla saso sokugcina, manje isixazululekile le nkinga. Kanjani lo mntwana esiswini, ungakwazi kalula ukutshela udokotela abanolwazi noma obelethisayo, anakho ukukutshela lokho uzizwa, okuyinto kususwe ikhanda, izinyawo, izingalo nokunye. Kodwa umama kakhulu Akunzima ukuthola. Ngokwezibalo, u-90% omama abakhulelwe bazi kahle ukuthi yini isikhundla bathatha ingane.
Kwesinye okhalo ngokuthi. Kushiwo ngamuphi umqondo ukuthi ingane esiswini breech isethulo? Booty phansi. Ngenxa yalesi senzakalo, kufanele yasithatha ngokungathí sina, kumelwe acabangele isikhundla lwekhanda ingane ezihlukahlukene zibhekise kanye nezinye izinto eziningi. Isikhathi esining impela, odokotela linqume kwesigaba cesarean. Ngezinye izikhathi bathola ukuthi ngisho ngaphansi kwezimo ezinjalo, odokotela wengane avunyelwe nokubeletha yemvelo, uma:
ububanzi isitsha umama;
azikho contraindications nokubeletha zemvelo.
Breech isethulo kungatholakala by ultrasound, okuzokwenza kuphakathi ku amasonto okugcina enkathi yokukhulelwa noma ngaphambi nje kokuba abelethe.
Uma umbungu ungephansi kwemandla ngaphesheya ngesonto lamashumi amabili yokukhulelwa, udokotela uzokutshela ncamashi abe sinqumo, kulesi sikhundla ikhanda ngolunye uhlangothi, futhi pop - nabanye. Yeka indlela okuyingozi kuyinto isethulo? Ngaphambili, odokotela ukuba balungise isikhundla womntwana, ekhomba ke endaweni efanele, kodwa kwathatha omningi futhi babe nesineke, banikeze isinyathelo ukulethwa cesarean kwakuyingozi kakhulu. Manje odokotela reinsured, ngokushesha ukuthumela obelethayo nokuqhutshwa. Kukhona okuhlukile kulokhu: amawele, uma ibekwe yonkana nengane eyodwa. Kulokhu, ingane yesibili kuyenzeka ujike, usebenzisa indawo singenamuntu.
Kanjani ukuba alungise isimo wengane
Ngisho noma udokotela zilethwe sinqumo yayo: breech noma isethulo transverse, umama yena uyakwazi ukusiza ingane yakho ukuthatha isikhundla lesifanele. Okudingekayo - ke nsuku zonke esiswini esingenalutho ukwenza umsebenzi. Kodwa kungakenzeki lokho, ukuxoxa nodokotela wakho, kwezinye izimo, ukusebenza kwalesi ejimini is contraindicated.
Ukuzivocavoca kungaba zahlukahlukene kakhulu, "ikati", "inja isifonyo phansi," isekhula ezinyakazayo ukhalo, "eziyisishiyagalombili". Noma eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe: thatha isihlalo imicamelo. Lala phansi uphakamise imilenze yakho, uwafake esitulwini. Ngaphansi ukhalo umcamelo. Kufanele uthole emgceni locondzile, engela phansi - 45 degrees. Thatha isiguqo noma uhlaka ngoba yokuzivocavoca. Thola lakho konke okuhamba ngezine, ukuphumula ikhanda lakho phezu umcamelo futhi nje uphumule.
Naphezu kweqiniso lokuthi lokhu elula kakhulu futhi ezinye umzimba ezilula, bayokusiza futhi ingane yakho ngesikhathi sokubeletha.
Nomthandazo ngesikhathi sokukhulelwa. Nomthandazo eNcasakazini futhi Matrona eMoscow
Pyelonephritis ekukhulelweni: izimpawu, uphethwe, ukuphathwa, ingozi
Ukukhetha izicathulo, ucabangela ubukhulu unyawo ngamasentimitha
Sweatshirts ngixhumane imidvwebo, izithombe kanye nencazelo
Oat: izithombe, incazelo, ayelapha